ပွင့်ဖြူ, မကွေး, Myanmar (Burma)
ကလေးတွေကိုချစ်တတ်သူ။ သဘာဝတရားကိုမြတ်နိုးသူ။ .ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားနိုင်ဖို. ကြိုးစားနေတဲ့သူ။ အသည်းခဏခဏကွဲဖူးသော်လည်း အချစ်သစ်များကြောင့်အနာကျက်လွယ်သူ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုချစ်ပေမယ့် အချင်းချင်းရန်ဖြစ်တဲ့သူအားလုံးကို ဆွဲထိုးတတ်တဲ့သူ။ မကြာခဏအပျင်းထူနေတတ်သူ။ အမြဲလိုလိုပြာယာခတ်နေသူ။ ဆူခံရတာများလွန်းလို. အမေ့စကားနားရည်ဝနေသူ။ ပြီးတော့ ….. မုန်းချောင်းနံဘေးကရွာငယ်လေးကိုတွယ်တာတတ်တဲ့သူ။
ရေးသူ သံလွင်ငြိမ်းချမ်း ပို.စ်တင်ချိန် ..... 1:18 AM 1 comment: Links to this post
ရေးသူ သံလွင်ငြိမ်းချမ်း ပို.စ်တင်ချိန် ..... 1:02 AM No comments: Links to this post
ကျွန်တော်တို. တိုင်းပြည်၏ ၀ါဒဖြန်.ချီရေး လှိုင်းတံပိုးအောက်မှ အစိုးရ၏ စီမံကိန်းများမှာ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် နိဗ္ဗါန်ဘုံသို.၀င်ခွင့်လော၊ ပျားရည်ဆမ်းသောဓားသွားလော ဆိုသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်အလေးအနက် စဉ်းစားနေမိပါတော့သည်။ ။
ရေးသူ သံလွင်ငြိမ်းချမ်း ပို.စ်တင်ချိန် ..... 11:00 PM3comments: Links to this post
မှတ်ချက် လေးစားရသော ဆရာတစ်ဦးက အသံထွက်အမှန်မှာ အိုဇမန်ဒီယာ့စ် ဖြစ်ကြောင်းပြင်ပေးထားပါသည်။
ရေးသူ သံလွင်ငြိမ်းချမ်း ပို.စ်တင်ချိန် ..... 11:57 PM No comments: Links to this post
VERITAS NATIO LIBERIBIT ဆိုတာ လက်တင်ဘာသာစကားပါ။ တစ်နေရာမှာသုံးထားတာတွေ.တော့ အဓိပ္ပါယ်လေးကိုသဘောကျတာနဲ. ယူသုံးလိုက်တာပါ။ veritas ဆိုတာလက်တင်စကား verity ကလာတာပါ။ အမှန်တရားလို. အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Natio ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Nation နဲ.တူပါတယ်။ Liberibit ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်လို Liberty ပါ။
The Truth Will Set The Nation Free... လို. အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စာကြောင်းလေးမို. မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ခေါင်းစီးမှာတင်ပေးထားလိုက်တာပါ။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာမြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုင်စွဲထားတဲ့ အကြမ်းမဖက်နှလုံးရည်တိုက်ပွဲလမ်းစဉ်အပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူပါ။
ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုသွားတဲ့ခရီးဟာ တိုတိုလေးမဟုတ်သလို တိုက်ပွဲဟာလဲနေ.ချင်းညချင်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကဒေါင်းညင်သာပါခင်ဗျာ …. တဲ့
ကြယ်တွေစုံပြီလား ……… ဗင်းဆင့်အနားကိုလာကြတယ်
Starry, Starry night ………...........…………………… paint your palette blue and grey